IBUDATA NGWONGWO DIAGNOSTIC TOOL N'EFU NA KỌMPUTA - MMEMME NYOCHA - 2019
Ọtụtụ ndị ọrụ na-atụkwasị obi na NVIDIA GeForce Ahụmahụ iji hazie ihe egwuregwu ha niile kachasị amasị ha ozugbo ọ nwụsịrị. Otú ọ dị, nsogbu nwere ike ime. Dịka ọmụmaatụ, ihe omume ahụ nwere ike ọ gaghị ahụ naanị egwuregwu arụnyere. Kedu ka esi eme? Gaa iji hazie ihe niile? Ọ dịghị mkpa ịghọta nsogbu ahụ.
Nbudata ihe ohuru nke NVIDIA GeForce Experience
Ndepụta egwu na GeForce Experience
Ekwesịrị ikwu ozugbo na ọ bụrụ na usoro ahụ anaghị ahụ egwuregwu ahụ ma tinyeghị ya na ndepụta ya, nke a apụtaghị mgbe ọ bụla ọdịda. N'ọtụtụ ọnọdụ, ụkpụrụ nke ngwa ahụ n'onwe ya bụ ụta. Na n'ozuzu, e nwere ihe nwere ike ịme ihe mere emeghị ka listi egwu dị iche iche, naanị otu n'ime ha bụ ọdịda nke Ahụmahụ GeForce. Ka o sina dị, a ghacha edozi ihe niile n'enweghị nsogbu.
Ebumnuche 1: E depụtaghị ndepụta ahụ.
Ihe kachasị kpatara na ngwaahịa ụfọdụ na-efu site na listi egwuregwu na GeForce Experience bụ enweghị mpempe emelite ndepụta ahụ. Enweghị ike gosipụta ihe niile na komputa ahụ, a na-achọrọ ihe omume ahụ mgbe niile iji melite listi ahụ iji gosipụta ngwaahịa ọhụrụ.
Ọ na-emekarị na ọ dịbeghịrị nyocha ọhụụ. Karịsịa, nsogbu a dị mkpa na ikpe ebe a na-arụ ọrụ ahụ, usoro ahụ enweghịkwa oge imeghachi omume n'oge kwesịrị ekwesị.
E nwere ngwọta abụọ na nke a. Ihe kachasị mkpa bụ ichere ruo mgbe ihe omume ahụ na-enyo disk maka mmemme ọhụrụ. Otú ọ dị, o siri ike ịkpọ nke a n'ụzọ dị irè.
Ọ ka mma iji aka dozie listi.
Enwere ụzọ dị mfe iji mee nke a - na taabụ "Home" chọrọ pịa bọtịnụ "More" ma họrọ otu nhọrọ "Egwuregwu Egwuregwu".
Ụzọ ziri ezi karị nwere ike ịba uru. Iji mee nke a, tinye usoro menu ntọala. Iji mee nke a, ịkwesịrị ịpị ihe nkedo na nkụzi ihe omume ahụ.
Ihe omume ahụ ga-aga na ngalaba ntọala. N'ebe a, ị ga-ahọrọ ngalaba "Egwuregwu".
Na mpaghara "Egwuregwu Egwuregwu" nwere ike ịhụ ozi gbasara ndepụta. Nke a - ọnụ ọgụgụ nke achọpụtara egwuregwu akwado, oge nlele ikpeazụ maka mmelite nke listi, na ihe ndị ọzọ. N'ebe a, ị kwesịrị ịpị Nyochaa Ugbu a.
A ga - emelite ndepụta nke egwuregwu niile dị na PC a.
Ugbu a, egwuregwu ndị a na-akwadoghị ga-apụta na listi.
Ebumnuche 2: Chọọ egwuregwu
Ọ pụkwara ịpụta na usoro ihe omume ahụ adịghị achọta egwuregwu ebe ọ na-achọ ha. Dịka, GeForce Experience na-akpaghị aka na-achọpụta folda ahụ na ngwa ndị dị mkpa awụnyere, mana ndị ọzọ anaghị eme.
Iji dozie nke a, ịkwesịrị ịlaghachi n'usoro ihe omume ahụ ma banyeghachi ọzọ na mpaghara ahụ "Egwuregwu".
Ebe ị ga-ahụ ebe ahụ Nyocha ebe. N'okpuru ebe isiokwu a bụ ndepụta nke adreesị ebe Ahụmahụ na-achọ egwuregwu.
Bọtịnụ "Tinye" na-enye gị ohere igbakwunye adreesị ndị ọzọ ebe a site na ịgbasa mpaghara ọchụchọ maka usoro ahụ.
Ọ bụrụ na ị pịa "Tinye", ihe nchọgharị na-egosi, ebe ịchọrọ ịchọta na họrọ nchekwa achọrọ.
Ugbu a GF Ahụmahụ ga-amalite na-achọ egwuregwu ọhụrụ n'ebe ahụ, mgbe nke ahụ gasịrị, ọ ga-agbakwunye ha na ụdị egwuregwu dị.
Ọtụtụ mgbe nke a na-enye gị ohere idozi nsogbu ahụ kpamkpam. Karịsịa mgbe nsogbu ahụ na-apụta mgbe ụzọ ndị na-abụghị usoro nke ịmepụta nchekwa na egwuregwu, ma ọ bụ mgbe ha na-anọghị n'otu ebe.
Ebumnuche nke 3: Enweghi asambodo
Ọ na-emekarị na ngwaahịa anaghị enweta akwụkwọ ikikere nke eziokwu. N'ihi ya, usoro ahụ enweghị ike ịchọpụta usoro ihe omume dịka egwuregwu ma tinye ya na ndepụta ya.
Ọtụtụ mgbe, nke a na-eme na ọrụ ndị a na-amaghị nke ọma, nakwa dị ka mbipute egwu egwu nke meworo ka edetu. Ọ na-emekarị na mgbe ị na-agbalị iwepu usoro nchekwa (kachasị mkpa maka ọgbụgba ọhụrụ dịka Denuvo), ndị omempụ dị otú ahụ na-ehichapụkwa ụbọchị izu ike nke ngwaahịa ahụ. Na n'ihi na GF Ahụmahụ anaghị amata usoro ihe omume ahụ.
N'okwu a, onye ọrụ, lee, enweghị ike ime ihe ọ bụla. Ị ghaghị iji aka gị mee mgbanwe.
Ebumnuche nke 4: Ịhapụ usoro ihe omume ahụ
Ọ gaghị ekwe omume ikpochapụ mmezigharị nke mmemme ahụ. Na nke a, nke mbụ ọ bara uru na-agbalị ịmalitegharịa kọmputa ahụ. Ọ bụrụ na nke a anaghị enyere aka na omume ndị dị n'elu adịghị emelite listi egwuregwu, mgbe ahụ, ị ​​ga-ebigharị ihe omume ahụ.
Nke mbụ, a na-atụ aro ka ị wepụ ihe omume ahụ n'ụzọ ọ bụla kwesịrị ekwesị.
Gụkwuo: Otu esi ewepụ GeForce Ahụmahụ
Ihe GF oge na-abịa na ndị ọkwọ ụgbọala maka kaadị vidiyo, yabụ ị ga-ebudata ngwugwu nrụnye ọhụrụ site na ebe nrụọrụ weebụ NVIDIA.
Download NVIDIA ọkwọ ụgbọala
N'ebe a, ị ga-akọrọ "Gbaa ngwaọrụ dị ọcha". Nke a ga-ewepu nsụgharị ọ bụla nke ọkwọ ụgbọala, ngwanrọ ọzọ, na ihe ndị ọzọ.
Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-arụ ọrụ ngwanrọ maka kaadị vidiyo ahụ, tinyere NVIDIA GeForce Ahụmahụ ọhụrụ.
Ugbu a ihe niile kwesịrị ịrụ ọrụ nke ọma.
Dịka ị pụrụ ịhụ, nsogbu siri ike nke na-enweghị ike idozi na oge kachasị na ọ gaghị emetụta nsogbu a. Igwu igwu egwu n'usoro ihe omume ahụ, mee ntọala ndị dị mkpa, ihe niile ga-arụkwa ọrụ dịka o kwesịrị.